Yini ingane ephupha ngayo: umntwana ezandleni zakhe, umntwana
Ukubamba ingane ezandleni zakho: leli phupho lilethaphi empilweni yakho?
Asikhulume ngalokho ingane ephuphayo.
Akumangalisi ukuthi izingane ziyizimbali zokuphila, ezenza abantu bajabule nenjongo yokuphila. Kuzo zonke izizwe zomhlaba, ingane ibonisa ukuhlanzeka nokuqala kokuphila okusha. Kodwa ingabe lokhu kuhlangene nokuchazwa kwamaphupho ahlobene nezingane? Iphupho lingazisho ukuthini lapho uphupha ingane ngisesandleni sakho? Okuningi mayelana nokuthi ungayichaza kanjani incwadi yokuphupha, nokuthi impilo yakho yesikhathi esizayo izoshintsha kanjani - funda ngezansi.
Incazelo: yini ingane ephupha ngayo
Ngokuvamile, lokhu kuyisibonakaliso esihle kakhulu, esithembisa ukuvumelanisa kokuphupha emndenini nokuphila kahle kwezezimali. Kodwa ngaphambi kokuphendukela ezincwadini zephupho, bekungeke kulimaze ukukhumbula yonke imininingwane yephupho: ukuthi ubulili bekungubani ingane, ukubukeka kwayo, ukuziphatha kanye nemizwelo, wazizwa kanjani ngenkathi wenza lokhu.
Yiziphi izinsana ezisanda kuphupha, funda lapha .
Ngakho-ke, isibonelo, uma ingane enhle nezolile iphupha, incwadi yephupho labesifazane baseMpumalanga kanye nomhumushi kaMiller bahumusha leli phupho njengomvuzo wokuqala wokuzwa imizwa eqotho nefudumele. Kungenzeka, empilweni yakho kuyoba umngane weqiniso noma umngane ozinikele wokuphila.
Umntwana okhalayo uthi lo mphupho uzobhekana nezinkinga ezinkulu zezempilo noma ubunzima bezezimali. Gcina umntwana ezandleni zakhe futhi ngesikhathi esifanayo ulalele ukuhleka kwakhe okuhle noma ubheke ukumomotheka kwakhe, uthi empilweni yangempela yonke into iyosebenza kahle kakhulu. Abanye abahumushi bephupho bahumusha lesi sibonakaliso njengokufeza okusheshayo kwesifiso esithandwayo.
Ukugcina ingane elele ephusheni ibonisa umphumela ophumelelayo wezindaba zamanje kanye nokuqala. Impilo yakho iyogcwala injabulo nokuvumelana. Konke kuzoqhubeka kahle, ngaphandle kokushaqeka nokuhlangenwe nakho okubi.
Uma ngabe ingane iyintombazane, yiba nezinkinga ezingase zenzeke futhi zihlangane. Umfana onesimo esibucayi uyisiqiniseko sokuthi umsebenzi wakho uzovuzwa, mhlawumbe uzobe ukhulisa noma wakha indawo enenzuzo.
Uzizwa kanjani kulephupho
Iphupho, lapho ubeke khona ingane ezandleni zakho futhi ngesikhathi esifanayo uhlangabezana nemizwelo engathandeki futhi engalungile, ibonisa ukuthi uzoba yisisulu sokukhohliswa noma ukukhwabanisa. I-scandal kungenzeka kumuntu oseduze. Ezinye izincwadi zokuphupha zihumusha lokhu njengokulimala okubukhali empilweni.
Uma uzame ukususa ingane owawuphethe, kuyisibonakaliso esiqinisekisayo sokuthi empilweni yakho kwakukhona umphikisi ofuna ukuthatha indawo yakho. Bheka eduze nozakwabo emsebenzini noma kumvelo wekhethiweyo wakho (-s).
Ukubalekela ingozi ngenkathi ubamba umntwana, kufanekisela izenzakalo ezikhathazayo zephupho, okungenzeka, zizoshintsha kakhulu impilo.
Ukuhlabelela i-lullaby kumntwana futhi ngesikhathi esifanayo ukuthola injabulo nokuqiniswa kusho ukuthi ekugcineni uthole ukuvumelana nawe, okuzoholela ekutheni kube ngcono impilo kanye nobuhlobo nomndeni nabanye. Uma ubona ingane yakho kulephupho, mhlawumbe ingane yakho izokujabulisa ngokuziphatha kwayo nangothando.
Gcina ingane ephusheni, njengoba usuyiqonde kakade, kaningi, ibonisa ushintsho oluhle esikhathini esizayo. Kodwa ngaphezu kwalokho, leli phupho lingabuye lifakaze ezifisweni ezifihliwe zokugcwalisa umndeni wakhe ngenjabulo encane.
Sika izinwele zakho: kusho ukuthini leli phupho?
Indodakazi iphupha ngani? Ukuhunyushwa kwezincwadi zamaphupho aziwayo
Ukuchazwa kwamaphupho mayelana nokwesaba izindawo eziphakeme
Imibala yezigidi zegadi yakho
Izinga lokushayela abantu
Ukuthuthukiswa okufanele kwezingane
Indlela yokufunda ukupheka?
Ukuzivocavoca okuhle nokusebenza kahle kokulungiswa kwesibalo
Yini eyingozi kakhulu ekudleni okusheshayo?
Umbono omuhle kakhulu uwukuphi futhi nini ongakusho
Indlela yokugqoka isikhwama sokuzithokozisa
Isilinganiso samadoda athandwa kakhulu emhlabeni
Incazelo egcwele yokudla kwaseJapane
Minimalism vs Eccentricity: izitayela ezintsha ze-nail art
Ihhovisi elisha ligqoka
Ukunakekela ubuso ebusika
Ukudla okuhlukile - ingukudla?
Ukuya ocansini ezindaweni ezingezona zendabuko noma ukuhlukanisa impilo yakho